Marka aad go'aansato inaad isticmaasho | Ota Citizen's Plaza
Qolka-qaabka / qolka shaaha
Qolka tababarka, teniska otomaatiga, teniska miiska
Kulan hordhac ah
Markaad isticmaaleyso hoolka weyn, hoolka yar, qolka carwada, iyo jimicsiga
Waxyaabaha lagu madadaaliyo, iyo marka aad adeegsaneyso xarumaha madadaalada ee loo arko inay lagama maarmaan u yihiin maareynta xarunta ayaa ah, ka dib markaad keento dukumiintiyada soo socda hal bil ka hor rajada maalinta isticmaalka sida caadiga ah, fadlan u raac karraaniga kulanka.
Jaantuska barnaamijka ama horumarka, waraaqo, jadwalka amniga, tigidhka ogolaanshaha (tusaale ahaan).
Waxaas kor ku xusan ka sokow, dhacdooyinka ka socda hoolka weyn waa sawir qaadis masawir ah, sawir laydh, iyo sawir acoustic ah.
(Haddii aan go'aan laga gaarin, fadlan nala soo socodsii magaca qofka mas'uulka ka ah iyo macluumaadka xiriirka.)
Markaad isticmaaleyso qolka tababarka, istuudiyaha muusikada, qolka shirarka, qolka qaabka Jabbaan, qolka shaaha, qolka farshaxanka
Fadlan kulan la yeelo shaqaalaha ku saabsan qaabeynta qolka iyo tas-hiilaadka dhacdooyinka ah ee la isticmaali doono ugu yaraan 2 maalmood ka hor taariikhda isticmaalka.
Markaad iibinayso alaabada
Fadlan hubso inaad soo gudbiso mid gaar ah "Codsiga Ansixinta Badeecadaha, iwm."
Codsiga oggolaanshaha iibinta alaabada
Ogeysiinta xafiisyada dawladda ee ay khusayso, iwm.
Iyada oo kuxiran waxyaabaha ay ka koobantahay munaasabada, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la ogeysiiyo xafiisyada dowladeed ee soo socda ee khuseeya.
Fadlan horay u hubi oo raac nidaamka loo baahan yahay.
Waxyaabaha ogeysiiska ah
Isticmaalka dabka, iwm. Qaybta Kormeerka Saldhigga Dabka ee Yaguchi
2-5-20 Tamagawa, Ota-ku Telefoonka: 03-3758-0119
Amniga iwm Saldhigga Booliska Ikegami
3-20-10 Ikegami, Ota-ku Telefoonka: 03-3755-0110
Xuquuqda Qoraalka Ururka Xuquuqda Muuqaaladda Japan
Laanta Bandhigga JASRAC Tokyo
Nippon Life Shinjuku West Exit Dhismaha 10F Telefoonka: 03-5321-9881
Fadlan sheeg magaca qabanqaabiyaha, macluumaadka xiriirka, iwm ee ku dhejisan boorarka, waraaqaha, tikidhada gelitaanka, iwm.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku dhajiso boorarka iyo waraaqaha hoolka, fadlan nala soo socodsii. (Ku xaddidan dhacdooyinka lagu qabto hoteelka)
Fadlan nala soo socodsii maxaa yeelay waxaad awoodi kartaa inaad ku dhajiso boodhadhka goobta loogu talagalay oo keliya maalinta dhacdada.
Macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka waxaa lagu dhejin karaa bilaash joornaalka macluumaadka ee ay daabacaan Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward iyo bogga internetka. (Waxay kuxirantahay tusmada, ma aqbali karno)
Fadlan buuxi foomka loogu talagalay una gudbi qofka mas'uulka ka ah xarunta.
XNUMX jadwalka dhacdada dhismaha arjiga daabacaadda macluumaadka dhacdada bogga hore
Ku saabsan maaraynta xarumaha
Maalinta la isticmaalayo, fadlan u soo bandhig foomka oggolaanshaha isticmaalka miiska soo dhaweynta ee dabaqa 1-aad ka hor intaadan qolka isticmaalin.
Markaad isu diyaarineyso musiibada, fadlan qaado dhammaan tallaabooyinka suurtogalka ah sida hagidda daadguraynta ee booqdayaasha, xiriirka degdegga ah, gargaarka degdegga ah, iwm, adigoo la yeelanaya kulan faahfaahsan shaqaalaha oo aad u xilsaarto shaqaale dib u habeyn ah.
Marka loo eego Sharciga Adeegga Dabka, fadlan si adag u ilaali awoodda martida.Looma isticmaali karo wax kabadan awooda.
Haddii ay dhacdo shil ama jiro, isla markiiba ogeysii shaqaalaha oo raac tilmaamaha.
Fadlan ogow inaannaan masuul ka ahayn xatooyada.
Waxaa jira qolal dhallaanka oo ku yaal dabaqa 1-aad iyo 3-aad ee hoose, marka fadlan la socodsii shaqaalaha haddii aad rabto inaad isticmaasho.Fadlan ku maaree is-maamulka isticmaale.
Isticmaalka ka dib, ku soo celi qalabkii dhacdooyinka la isticmaalay xaaladdii asalka ahayd.Intaas waxaa sii dheer, fadlan hubso inaad la tagto alaabtaada gaarka ah hana uga tagin xarunta.
Haddii xarunta ama qalabka waxyeello soo gaarto ama lumo, magdhow ayaa lagaa siinayaa dhaawaca.
Fadlan guriga la tag walxaha qashinka ah ee ka soo baxa masraxa, sida qashinka ka yimaada cunista iyo cabitaanka.Haddii ay dhib tahay in gurigiisa la geeyo, waxaan uga shaqeyn doonnaa lacag, sidaas darteed fadlan nala soo socodsii.
Haddii ay lagama maarmaan tahay in la maareeyo xarunta, xubin ka mid ah shaqaalaha ayaa geli kara qolka aad isticmaaleyso.
Abaabuluhu wuxuu mas'uul ka yahay abaabulka iyo hagidda martida, qabashada, iyo madaddaalada.Iyada oo ku xidhan dhacdada, qabanqaabiyaha ayaa u diyaarin kara shaqaale masraxa, iftiinka, dhawaaqa, iwm.
Haddii la filayo in tiro badan oo soo booqdeyaal ah ay imaan doonaan ka hor waqtiga furitaanka, ama haddii ay suurogal tahay jahawareer xilliga munaasabadda, waa masuuliyadda qabanqaabiyaha inuu u xil saaro qabanqaabiyayaal ku filan.
Fadlan hubi in qabanqaabiyaha uu ilaaliyo waxyaabaha soo socda oo uu ku wargeliyo martida.
Ha ku dhejin warqad, cajalad, iwm derbiyada, tiirarka, daaqadaha, albaabada, sagxadaha, iwm.
Ha iibin ama ha soo bandhigin badeecada, ha u qaybin waxyaabaha daabacan, ama haddii kale ha sameyn wax la mid ah oggolaansho la'aan
Ha keenin waxyaabaha ama xayawaannada halista ah (marka laga reebo eeyaha adeegga) oggolaansho la'aan.
Sigaar cabidda waa ka mamnuuc dhismaha oo dhan.Ha cunin, ha cabbin, sigaarna ha cabin marka laga reebo meelaha loogu talagalay.
Ha soo saarin mug wax u dhimi kara maaraynta xarunta ama dhib u keeni karta dadka kale.
Wax dhib ah ha ugu keenin dadka kale, sida buuq, qaylo, ama rabshad.
Ku saabsan isticmaalka goobta baabuurta la dhigto
Waxaa jira qabanqaabiya khaas ah oo ku yaal dabaqa hoose ee 2aad. (Xadka dhererka 2.1m)
Waxaan ku siin doonaa tigidh baarkinka qabanqaabiyaha. (Lambar xadidan) Lama isticmaali karo tikidh dhigasho la'aan.
Fadlan ku dheji tigidhka baarkinkaaga muraayadda hore ee gaarigaaga.
Ma jiro meel la dhigto oo loogu talagalay dadka isticmaala guud.
Abaabulaha waa inuu hubiyaa in dadka isticmaala guud aysan ku imaan baabuur.
Fadlan ka soo gal albaabka hore ee dabaqa 1-aad ee tallaabada.Fadlan isticmaal wiishka si aad u gaarto qol kasta.
Haddii aad ka soo gashid goobta baabuurta la dhigto ee dabaqa 2-aad, waxaad isticmaali kartaa aaladda fuulitaanka jaranjarada, in kasta oo ay jiraan tallaabooyin. (Miisaanka illaa 150kg) Haddii aad si hore ah noola soo xiriirto, xubin ka mid ah shaqaalaha ayaa heegan ku jira.
Musqulaha ujeeddooyinka badan waxay ku yaalliin dabaqa 1-aad ee hoose, hoolka weyn ee dabaqa 1-aad, iyo dabaqa 3-aad.
Kuraasta curyaamiinta ee kirada ayaa sidoo kale laga heli karaa dhismaha, markaa fadlan nala soo socodsii haddii aad rabto.